अफ्रिदीले मोदीको आलोचना गर्दा भारतीय क्रिकेटर आक्रोशित
६ जेठ, काठमाडौं । पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदीमाथि अहिले भारतका केही क्रिकेटरहरु खनिएका छन् । अफ्रिदीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विषयमा गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई लिएर उनीहरु भड्किएका हुन् ।
अफ्रिदी हालै सामाजिक कामको सिलसिलामा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर गएका थिए । त्यहाँ उनले कश्मिरी जनताका बीच सम्वोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसको भिडियो बाहिर आएपछि भारतमा भाइरल भइरहेको छ ।
अफ्रिदीले भनेका छन्, ‘अहिलेको समयमा संसारभर ठूलो रोग फैलिइरहेको छ । तर, योभन्दा ठूलो रोग मोदीको मन र मस्तिष्कमा छ । त्यो रोग धर्मको रोग हो । उनी धर्मलाई समातेर राजनीति गरिरहेका छन् । यहाँभन्दा दुई किलोमिटर टाढा हाम्रा काश्मिरी दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा बुवाआमामाथि लामो समयदेखि उनी अत्याचार गरिरहेका छन् ।’
अफ्रिदी अगाडि भन्छन्, ‘मोदी आफूलाई निकै साहसिक मान्छे देखाउन खोज्छन्, तर वास्तविकतामा डरपोक छन् । यति सानो कश्मिरभित्र उनले सात लाखको फौज खडा गरेका छन् । जबकी हाम्रो सिंगै पाकिस्तानको फौज सात लाख छ । तर, मोदीलाई यो थाहा छैन कि हाम्रा सात लाख फौजका पछाडि २३–२३ करोडको फौज खडा छ । हामी सबै हाम्रो सुरक्षा फौजको साथमा छौं र म आफ्नो फौजलाई सलाम गर्छु ।’
अफ्रिदीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा अगाडि प्रतिवाद गर्न तम्सिए गौतम गम्भिर । गौतम र अफ्रिदीबीच पुरानै दुश्मनी छ ।
गम्भिरले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘पाकिस्तानका सात लाख फौजलाई २० करोडको समर्थन छ । यसो भन्छन् १६ वर्षका मानिस शाहिद अफ्रिदी । तर, ७० वर्षदेखि पाकिस्तान काश्मिरका लागि भिख मागिरहेको छ । अफ्रिदी, इमरानजस्ता जोकरहरुले पाकिस्तानी जनतालाई मुर्ख बनाउन सक्छन्, तर काश्मिर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बंगलादेशलाई सम्झेका छौ ?’
यसैगरि अर्का भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले लेखेका छन्, ‘यतिबेला सिंगो विश्व कोरोनासँग लडिरहेको छ, तिमीलाई चाहिँ कश्मिरको चिन्ता ? कश्मिर हाम्रो थियो, हाम्रो हो र हाम्रै रहन्छ । चाहे २२ करोड लिएर आओ, हाम्रो एक लाख बराबर हुन् । बाँकी गन्ती आफैं गर्नु ।’
अफ्रिदीको भिडियो भाइरल भएपछि भारतमा यूवराज सिंह र हरभजन सिंहमाथि निशाना साँधिएको थियो । यी दुईले अफ्रिदीको एउटा च्यारिटी संस्थालाई सन्देशमूलक भिडियो पठाएका थिए । भारतविरोधीलाई सहयोग गरेको भनेर फ्यानहरुले उनीहरुलाई प्रश्न उठाए । त्यसपछि दुवैले जवाफ दिएका छन् ।
हरभजनले भनेका छन्, ‘मैले उनको संस्थालाई कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन । उनले सेवामूलक कार्यलाई भिडियो पठाइदिन आग्रह गरेपछि मानवीयताको नाताले पठाएको हुँ । अब उनीसँग मेरो सम्बन्ध टुट्यो ।’
यसैगरी यूवराज सिंहले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अफ्रिदीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको टिप्पणीबाट निराश छु । मैले तिम्रो आग्रहमा मानवीयताको नाताले सहयोग गरेको थिएँ । अब गर्दिनँ ।’
कर्णालीका संसदीय समितिले २७ महिनापछि पाए नेतृत्व
भाडा तिर्न नसकिने भन्दै सिभिल मलका व्यवसायी धर्नामा
नबिलले घोषणा गर्यो ‘डीजी बैंक’, चाहेकै समय र ठाउँमा बैंकिङ सेवा
कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६०० नाघ्यो, १४०८ जना डिस्चार्ज
मिर्गौला बेचबिखन आरोपमा डाक्टर, जनप्रतिनिधिसहित १२ जना पक्राउ
आइतबार थपिए ८२ कोरोनाका संक्रमित
लागु औषध मुद्धाका आरोपी छुटाउन इन्सपेक्टरलाई डेढ लाख घुसको प्रस्ताव
Jaya Bachchan’s swabs tests negative for Covid-19; Aishwarya Rai, Aaradhya test positive
एन्फालाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
प्रदेश १ मा बाढी पहिरो : १३ जना बेपत्ता, तीनजनाको जिवितै उद्धार
दाङमा फेरि भित्रियो सलहको हुल
चितवनमा प्रचण्डको गर्जन : के यो लम्पसारवाद हो ?
कसरी बित्दैछ बालबालिकाको दैनिकी ?
थिएरी हेनरीले ८ मिनेट ४६ सेकेण्ड घुँडा टेके
दाङमा रोपियो १ हजार ८ सय चिउरीका बिरुवा
बाढीले विराटनगर र कानेपोखरीमा ३७ परिवार विस्थापित
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि आएका १ हजार २५ वटा निवेद खारेज
गोल्डस्टारले थाल्यो एन ९५ मास्क र पीपीई उत्पादन
कित्ता काट खुला गर्न घरजग्गा व्यवसायीको माग
छाता : उपयोगिता, फेसन र रोचक कुरा
भारतमा एकैदिन थपिए साढे २८ हजार कोरोना संक्रमित
पहिलो चरणमा मलेसियाबाट ३३२२ जना नेपालीको उद्धार
बाढीले बगाउँदै गरेकाे अवस्थामा हरिणको उद्धार
ऐश्वर्या, जया र आराध्या क्वारेन्टाइनमा
जनता उर्लिएपछि आधा बजेटमै सकियो न्यातपोलको जीर्णोद्धार
झापामा एक लाख ४४ हजार नक्कली भारू बरामद, तीन पक्राउ
इरानमा सबै समारोह र प्रवेश परीक्षामा रोक
‘के माया लाग्छ र’ कि सुरविना
निगु पुखु : राजा महेन्द्रको स्वागतमा सुकाइयो, गणतन्त्रमा पायो पुनर्जीवन
नेपाल आयल निगममा नेविसंघको धर्ना (फोटो फिचर)
सिर्सिया नदीबाट जलकुम्भी निकालियो